September 2019 ~ Myanmar Online News
ကမ်းနားလမ်းညဈေးမှ လမ်းဘေးဈေးသည်များ ဆိုင်ခန်းနေရာချပေးမှုမကျေနပ်သဖြင့် ဆန္ဒပြမည်
11:58 PM ပြည်တွင်းသတင်း No comments
ကမ်းနားလမ်းညဈေးတွင် ရောင်းချနေသည့် ပစ္စည်းအဟောင်းများ ရောင်းချသည့် ဈေးသည် ၁၅၀ ကျော်မှ ဆိုင်ခန်းချပေးမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး မျှတမှုမရှိသည့်အတွက် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးနှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးများထံ တိုင်ကြားထားသော်လည်း တစ်လကျော်အထိ ထူးခြားမှုမရှိသဖြင့် ဆူးလေမြို့တော်ခန်းမရှေ့တွင် ဆန္ဒဖော်ထုတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။
လေကြောင်းဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုဆိုင်ရာ ဂုဏ်ပြုဆု မြန်မာ့လေကြောင်း ရရှိ
11:57 PM ပြည်တွင်းသတင်း No comments
မြန်မာ့လေ‌ကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ (UN) အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြို့ပြလေကြောင်းအဖွဲ့ချုပ်(International Civil Aviation Organization - ICAO) ထံမှ လေကြောင်းဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းမှုဆိုင်ရာ ဂုဏ်ပြုအသိအမှတ်ပြုလွှာကို ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ကြောင်း စက်တင်ဘာ(၃၀)ရက်က လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရုံးမှာ မီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ် လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ် ဦးရဲထွဋ်အောင်က ‌‌ပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။
ယူနီကုဒ်သုံးခြင်းကြောင့် အစိုးရနဲ့ Facebook က မိမိကို ပိုပြီး နောက်ယောင်ခံ စောင့်ကြည့်နိုင်မလား ? အစိုးရအနေနဲ့ ပြည်သူတွေကို ယူနီကုဒ်စနစ် ပြောင်းသုံးကြဖို့ အတင်းကာရော တိုက်တွန်းနေတာ ဘာကြောင့်လဲ ?
11:55 PM ဆောင်းပါး No comments
ယူနီကုဒ်ဟာ စံစနစ်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရဲ့ ဘာသာစကားနဲ့ နည်းပညာအတွက် အရေးကြီးတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဘာတွေအရေးကြီးတာလဲ၊ ဘယ်လောက် အရေးကြီးတာလဲဆိုတာ ကိုတော့ သက်သေပြနိုင်တာ အတော်ရှားပါတယ်။ Translate လုပ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုကြပေမယ့် ဘာသာပြန်သမျှ ဖတ်မရ၊ သုံးမရတဲ့အပြင် အဓိပ္ပါယ်လုံးဝ ဆန့်ကျင်နေတာတွေပါ ထွက်လာပါသေးတယ်။ နည်းပညာပိုင်းမှာ အထောက်အကူဖြစ်ပြီး မြန်မာ OS တွေ သုံးနိုင်တယ်လို့ ပြောရအောင်လည်း တိုက်ရိုက် ဘာသာပြန်တာတွေ တစ်လွဲဖြစ်နေလို့ English Language ကိုပဲ ပြန်သုံးကြရပါတယ်။ ဥပမာ “လော့အင်ဝင်ပါ၊ မှတ်ပုံတင်ပါ၊ စက်တင်များ၊ ပင်မစာမျက်နှာ၊ ထွက်မည်” စတဲ့ စကားလုံးတွေကြောင့် Beginners တွေရော Pro တွေပါ English လိုပဲ ပြန်သုံးကြပါတယ်။
မြသလွန်စေတီတော်မြတ်ကြီး၏ ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော် ရက်ပေါင်း (၂၀) ကြာ ကျင်းပမည်
မကွေးမြို့၊ မြသလွန်စေတီတော်မြတ်ကြီး၏ ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော်ကို သီတင်းကျွတ် လဆန်း(၁၀)ရက်မှ လပြည့်ကျော် (၁၄) ရက်အထိ ၈-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၂၇-၁၀-၂၀၁၉ ရက် အထိ ရက်ပေါင်း (၂၀) ကြာ ကျင်းပမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
သိန်း(၁၅၀၀၀) ထီဆုကြီးကို မိတ္ထီလာမြို့ အောင်ဇေယျာရပ်ကွက်နေ ကိုစိုးနိင်က ဆွတ်ခူး
10:41 PM ျပည္တြင္းသတင္း No comments
ဒီလသိန်း(၁၅၀၀၀) ထီဆုကြီးကို မိတ္ထီလာမြို့ အောင်ဇေယျာရပ်ကွက်နေ ကိုစိုးနိင်က ဆွတ်ခူးသွားကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
(၅၅) နှစ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့နေ့ အခမ်းအနားကျင်းပ
10:39 PM ျပည္တြင္းသတင္း No comments
အောက်တိုဘာ(၁)ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် (၅၅) နှစ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့နေ့ အခမ်းအနားကို နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကို (၁၉၆၄)ခုနှစ် အောက်တိုဘာ(၁)ရက်က ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ အမည်နဲ့ စတင်ဖွဲ့စည်း ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာ(၁)ရက်ကို ရဲတပ်ဖွဲ့နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး (၁၉၉၅) ခုနှစ် အောက်တိုဘာ(၁)ရက်မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ လို့ အမည်ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြစ်သာမြစ်ရေတိုက်စားမှုကြောင့် အန္တရာယ်ရှိသောနေရာများမှ ဘေးလွတ်ရာသို့ တပ်မတော်သားများနှင့် ဒေသခံပြည်သူများ ကူညီပြောင်းရွှေ့ပေး
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကလေးမြို့နယ် အတွင်းရှိ မြစ်သာမြစ်သည် ရေတိုက်စားမှုဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပြီး မြစ်ကမ်းနံဘေးရှိအောင်မေတ္တာ ရပ်ကွက်၊ ရတနာသီရိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းရှိ ဆွမ်းစားဆောင်မှာ ကမ်းပါးပြိုပြီး ရေတိုက်စားမှု အန္တရာယ် ဖြစ်ပေါ် လာနိုင်သဖြင့် မနေံက နံနက်ပိုင်းတွင် အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် နယ်မြေခံ တပ်မတော်သားများနှင့် ဒေသခံပြည်သူများ ပူးပေါင်း၍ ရေဘေးကင်းလွတ်ရာနေရာသို့ကူညီရွှေ့ပြောင်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
9:51 PM အႏုပညာ No comments
တရုတ်နိုင်ငံ တည်ထောင်သည့် နှစ်ပတ်လည်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဟောင်ကောင်၌ အဓိကရုဏ်းများဖြစ်ပွား
9:47 PM နိုင္ငံတကာသတင္း No comments
အောက်တိုဘာလ ၁ ရက် တရုတ် ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ထူထောင်သည့် နှစ် ၇၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ်နေ့တွင် ဟောင်ကောင်ရှိ ဆန္ဒပြသူများနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ထိပ်တိုက်တွေ့နေကြပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။
တရုတ် ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ တည်ထောင်ခြင်း နှစ် ၇၀ ပြည့် အခမ်းအနား ကျင်းပ
9:45 PM နိုင္ငံတကာသတင္း No comments
အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်တွင် တရုတ် ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ တည်ထောင်ခြင်း နှစ် ၇၀ ပြည့် အခမ်းအနားကို ပေကျင်းမြို့ မှာ ကျင်းပနေကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
9:42 PM ျပည္တြင္းသတင္း No comments
အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်ရှိ MICC-2 ခန်းမတွင် မြန်မာယူနီကုဒ်စံစနစ်သို့ကူးပြောင်းအသုံးပြုခြင်းအခမ်းအနားအား ကျင်းပနေပြီး နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ပညာရေးဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးတစ်ဦး ကျောင်းမှအပြန်လမ်းတွင် အသတ်ခံရ
9:40 PM ပညာေရး, မႈခင္းသတင္း No comments
စက်တင်ဘာ ၃ဝရက်နေ့ ညနေတွင် တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ် တက်ပုအောင်းရွာနှင့် သရက်ခုံရွာအကြား ကိုင်းတောအနီးလူသွားလမ်းပေါ်တွင် ( တက်ပုအောင်း-အထက)တွင် အထွေထွေလုပ်သားတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူ မိုင်သန်းသန်းစိုး ၃၄နှစ်၊ချင်းတိုင်းရင်းသူ၊ သရက်ခုံကျေးရွာသူသည် ကျောင်းမှအပြန်လမ်းတွင် ဓားဒဏ်ရာ၆ချက်ဖြင့်သတ်ခံရကြောင်း တောင်တွင်းကြီးမြို့မရဲစခန်းမှ သတင်းရရှိသည်။
9:39 PM အႏုပညာ No comments
ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဒေါက်တာ လဲ့လဲ့မော် လာမည့်ရုံးချိန်းတွင် ထားဝယ်လေယာဉ်ကွင်း ချုံရှင်းသည့်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် F-22 Sunny ကုမ္ပဏီ MD ကို စစ်ဆေးမည်
8:36 PM ျပည္တြင္းသတင္း No comments
စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်တွင် တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်ရုံး၌ အဂတိလိုက်စားမှုဖြင့် တရားရင်ဆိုင်နေရသည့် ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဒေါက်တာလဲ့လဲ့မော်နှင့် GGS ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူ သုံးဦးတို့ကို ၃၁ ကြိမ်မြောက်အဖြစ် ရုံးထုတ်ခဲ့ပြီး လာမည့်ရုံးချိန်းတွင် ထားဝယ်လေယာဉ်ကွင်း ချုံရှင်းသည့် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် F-22 Sunny ကုမ္ပဏီ MD ကို စစ်ဆေးမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
(၈)ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် (စ/ဆုံး)သိန်း ၁၅၀၀၀ ဆု မှ ဝေဝေဆာဆာ(၂)သိန်းဆု အထိ
NSCN(K) အဖွဲ့မှ မြို့နယ်မှူးအဆင့်ရှိသူတစ်ဦး လက်နက်ခဲယမ်းများနှင့်အတူ ဥပဒေဘောင်အတွင်း ဝင်ရောက်
8:32 PM မႈခင္းသတင္း No comments
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ခန္တီးမြို့နယ်အတွင်းရှိ ချင်းတွင်းတံတား၌ လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်နေသော တပ်ဖွဲ့ဝင်များထံသို့ စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက် ညနေ ၃ နာရီခန့်တွင် NSCN(K) အဖွဲ့မှ လဟယ်မြို့နယ်၊ ဝမ်တုံကျေးရွာနေ မြို့နယ်မှူး အဆင့်ရှိ ဦးဝမ်ဝမ်(ဘ)ဦးကမ်ဝမ်သည် ၎င်းကိုင်ဆောင်သည့် ၉ မမပစ္စတိုတစ်လက်၊ ၎င်း ကျည်အိမ်တစ်ခု၊ ကျည်နှစ်တောင့်နှင့် အတူ ဥပဒေဘောင်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရိှသည်။
အဂၤါၿဂိဳဟ္သြားမယ့္ဒံုးပ်ံသည္ ၆ လအတြင္း ခရီးစဥ္စတင္ႏိုင္မည္ဟုခန္႔မွန္း
8:30 PM နည္းပညာ, နိုင္ငံတကာသတင္း No comments
ကုေဋႂကြယ္သူေဌး၊ ထီထြင္ဖန္တီးသူ အယ္လြန္ မက္စ္က္က စေနေန႔မွာ သူ႔ရဲ႕ Space Xကုမၸဏီက မၾကာေသးခင္မွာတပ္ဆင္ၿပီးတဲ့ အဂၤါၿဂိဳဟ္ကိုသြားမယ့္ အာကာသယာဥ္နမူနာကို ထုတ္ျပခဲ့ပါတယ္။ အာကာသအေရး စိတ္၀င္စားသူေတြနဲ႔ သတင္းေထာက္ေတြကို တကၠဆက္ျပည္နယ္မွာ႐ွိတဲ့ Space Xရဲ႕ဒံုးပ်ံအဆင့္ႁမွင့္တင္ေရးေနရာမွာ အာကာသယာဥ္စတား႐ွစ္ပ္က လနဲ႔အဂၤါၿဂိဳဟ္ကိုဆင္းသက္ေနတာေတြပါ၀င္တဲ့ ဂရက္ဖစ္႐ုပ္သံကို ေဖာ္ထုတ္ျပသခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။
ျမန္မာယူနီကုဒ္စံစနစ္ကို ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေျပာင္းလဲသုံးစြဲၾကပါစို႔
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ယူနီကုဒ္စံစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းရာတြင္ အမ်ားျပည္သူအားလုံး တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေျပာင္းလဲသုံးစြဲ ႏိုင္မွသာ ေအာင္ျမင္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။
3:09 AM အႏုပညာ No comments
ေအာင္ဆန္းရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကို ယေန႔ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အမ်ိဳးသားျပတိုက္၌ စတင္ရိုက္ကူးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
2:46 AM အႏုပညာ No comments
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီ ၇ မိနစ္၊ (၃၉)စကၠန္႔ အခ်ိန္တြင္ ကန႔္ဘလူေျမငလ်င္စခန္းမွ အေနာက္ဘက္ (၇၂)မိုင္ ခန္႔ကြာေဝးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္တြင္း (ကေလးဝၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္(၆)မိုင္ခန္႔အကြာ) ေျမာက္လတၱီတြဒ္ (၂၃.၂၅)ဒီဂရီ၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ (၉၄.၃၈)ဒီဂရီ၊ အနက္(၆၈) ကီလိုမီတာကို ဗဟိုျပဳ၍ အင္အားရစ္(ခ္)တာစေကး (၃.၅) အဆင့္ရွိ အင္အားအနည္းငယ္ရွိေသာ ေျမငလ်င္တစ္ခု လႈပ္ရွားသြားေၾကာင္း မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။
မနက္ဖန္(ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔)မွစ၍ Unicode သုံးၾကဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တိုက္တြန္း
ေမြးရပ္ေျမရြာကေလးမွာ လုိအပ္တာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို လွဴဒါန္းျဖည့္ဆည္းေပးေပမဲ့ ၾကြားတယ္ထင္မွာစိုး အကုန္လံုးကို လွဴတိုင္း ထုတ္မေျပာျဖစ္ပါဘူးဆိုတဲ့ ေနမင္း
1:23 AM အႏုပညာ No comments
ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ ေနမင္းဟာ ေတာနယ္ကေလးမွာ ေမြးဖြားလာေပမယ့္ ဒီေန႔အထိ ေမြးရပ္ေျမေလးကို မေမ့ဘူးလို႔ ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ေနမင္းရဲ႕ ေမြးရပ္ဇာတိကေတာ့ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ၊ ပဲခူးၿမိဳ႕ မွာရွိတဲ့ သကၠလေက်း႐ြာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ရြာမွာေမြးလို႔လည္းသိမ္ငယ္စိတ္မရွိပါဘူးတဲ့။ ေတာမွာေမြးေပမယ့္ ၾကိဳးစားရုန္းကန္ရင္းအခုလိုဘဝကိုေရာက္ရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
အြန္လိုင္းေပၚက နာရီနဲ႕ ေျခေထာက္ပိုင္ရွင္အမွန္ကို ခ်ျပလိုက္တဲ့ ဟန္ေနတာ
1:22 AM အႏုပညာ No comments
မိန္းကေလးပရိသတ္ေတြက ဟန္ေနတာမွ ဟန္ေနတာ ဆိုၿပီး သဲသဲလႈပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာပဲ ပရိသတ္ေတြကို အသဲကြဲေစတဲ့ ဓါတ္ပုံေတြ ထြက္လာခဲ့ျပီး ခင္၀င့္၀ါကုိ ေပးခဲ့တဲ့ ေမြးေန႕လက္ေဆာင္ေတြအေျကာင္းကို ဟန္ေနတာက ခုလိုပဲေျဖရွင္းခဲ့ပါတယ္။
လမ္းေပၚတြင္ ေခြးစာေကြ်းပါက ဒဏ္ေငြ က်ပ္ ၁ သိန္းႏွင့္ ေထာင္ ၃ လ ခ်မွတ္မည္ဟု စည္ပင္မွ သတိေပး
1:20 AM အေထြေထြ No comments
ဗစ္တိုးရီးယားအမႈတြင္ တရားစြဲဆိုခံထားရေသာေရွ႕ေနမ်ားဖက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံေရွ႕ေနမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္မည္
1:19 AM ျပည္တြင္းသတင္း No comments
Miss , Mrs Grand Tourism Yangon 2019 နဲ႔ Miss Trans Beauty Queen Global Yangon 2019 ပြဲကို အနက္ေရာက္ဖက္ရွင္ေလးနဲဥ တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ နန္းသီရီေမာင္
12:59 AM အႏုပညာ No comments
(၅) ႀကိမ္ေျမာက္ WLPP အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ပဥၥမေျမာက္ေန႔ (ေနာက္ဆံုးေန႔) နံနက္ပိုင္း Panel Discussion က်င္းပ
12:32 AM ျပည္တြင္းသတင္း No comments
တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕အ စည္းမ်ား (NCA-S EAO) ၏ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ စဥ္တြင္ အမ်ဳိး သမီးမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈျမွင့္တင္ေရး အစီအစဥ္ (5th Workshop for Women Leadership in Peace Process-WLPP) အျဖစ္ လံုၿခံဳေရး က႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ (Security Sector Reform) ဆိုင္ရာ အလုပ္ ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပလ်က္ရွိရာ ယေန႔ အလုပ္ ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ပဥၥမေျမာက္ေန႔ (ေနာက္ဆံုးေန႔) နံနက္ပိုင္း တြင္ လံုၿခံဳေရး က႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ Panel Discussion တစ္ခု ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္။
ထိုင္းအစိုးရမွ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနသည့္ ျပည္နယ္မ်ားအပါအဝင္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္ (၂၄) ခုတို႔၌ အာဖရိကဝက္အျပင္းဖ်ားေရာဂါ သတိေပးခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္
ထိုင္းႏိုင္ငံက်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္ (၇၇) ခုအနက္ ျပည္နယ္ (၂၄) ခုတို႔၌ အာဖရိကဝက္အျပင္းဖ်ားေရာဂါ ( African Swine Fever- ASF ) ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အထူးသတိေပးခ်က္မ်ားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၇) ရက္ (ေသာၾကာ) ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနသည့္ျပည္နယ္ (၇) ခုပါဝင္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါျပည္နယ္မ်ားမွာ ခ်င္း႐ိုင္၊ ခ်င္းမိုင္၊ မယ္ေဟာင္ေဆာင္၊ ရာခ်ာဘူရီ၊ ရေနာင္း၊ ပတ္ခ်ာဘူရီႏွင့္တာခ့္ျပည္နယ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တာခ့္ျပည္နယ္တြင္ ခ႐ိုင္ (၅) ခုျဖစ္သည့္ မဲေဆာက္၊ တာေဆာင္ရန္း၊ အုန္းဖန္၊မဲရက္စ္မက္ႏွင့္ ေဖာ့ဖရာခ႐ိုင္တို႔၌လည္းေကာင္း၊ ပတ္ခ်ာဘူရီျပည္နယ္တြင္ ေနာင္ရာပေလာင္ႏွင့္ကန္ခရာခ်န္ ခ႐ိုင္မ်ား၌လည္းေကာင္း၊အာဖရိကဝက္အျပင္းဖ်ားေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္၍ အထူးေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။